Malagasy (mg) : Template “debian-installer” : Artful (17.10) : Translations : debian-installer package : Ubuntu
Ho dinganina ny fanontaniana ambany noho ny ambaratonga:
Translated and reviewed by jolay on 2007-07-11
Ny entana izay tefena amin'ny alalan'i debconf dia manisy ambaratongam-pialohana ny fanontaniana izay apetrany ho anao. Ireo fanontaniana izay manana fialohana voafidy na fialohana lehibe nohon'izay nofidianao ihany no hiseo, ireo fanontaniana tsy dia ilainadia ho dinganina.
Translated by Jaonary on 2006-03-17
Reviewed by Mariot Tsitoara on 2011-06-21
Afaka misafidy ny fialohan'ny fanontaniana ambany indrindra izay ho apetraka ianao:
'-' 'mahana' dia mikasika ireo zavtra mety hanimba ny milina raha
... tsy mamaly ny mpampisa ny milina.
'-' 'avo' dia ho an'ireo fanontaniana tsy manana valin-teny voafidy mialoha
... mahafam -po.
'-' 'afovoany' dia ho an'ireo fanontaniana izay afaka valina amin'ny valin-teny
... voafidy mialoha.
'-' 'iva' ho an'ireo fanontaniana tsotra izay azo valina soa aman-tsara amin'ny
... alalan'ny valin-teny voafidy mialoha.
Reviewed by Mariot Tsitoara on 2011-06-23
Ohatra, ity fanontaniana ity dia manana fialohana afovoany, raha toa ka fialohana 'avo' na 'mahana' no nofidinao dia tsy nahita an'io fanontaniana io ianao.
Translated by Mariot Tsitoara on 2011-06-21
Ohatra, ity fanontaniana ity dia manana fialohana "afovoany", raha toa ka fialohana "avo" na "mahana" no nofidinao dia tsy nahita an'io fanontaniana io ianao.
Suggested by Jaonary on 2006-03-17
Manova ny fialohan'ny debconf
Translated and reviewed by Jaonary on 2006-03-17
Contributors to this translation: Hary Solo Rabenamana, Jaonary, Mariot Tsitoara, Mariot Tsitoara, Tsiferana, andronic boanarijesy, jolay.